ZIMCOD: Uhulumende Kakatshiyane Lokubhadala Izikhwelede
HARARE — Inhlanganiso yezenotho ikhangela ngokuhlawulwa kwezikhwelede eye ZIMCOD ikhuthaza uhulumende ukuba eke ame kancane ukubhadala izikwelede alazo okwamanje kuze kucace ukuba umumo womnotho oqandaphi.
Umgcinisihlalo we Zimcod umnumzana Joy Mabhenge uthi uhulumende kumele atshiyane lodaba lwezikwelede ekuhleleni kwakhe uluhlu lwendleko kahulumende olweBudget akhangele inhlalakahle kazulu obhekane lobunzima obukhulu okwamanje, ngenxa yokungamanga kuhle komumo womnotho.
Ele Zimbabwe lile zikwelede zaphandle kwelizwe ezedlula ama bilion alitshumi ama dollar singakahlanganiseli lezikwelede alazo kumabhizimusi aphakathi kwelizwe.
Umphathintambo weze mali umnumzana Patrick Chinamasa utshele iqula lenhlanganiso eboleka amazwe womhlaba imali eye IMF elifike kuleli kuviki esanda kwedlula ukuba uhulumende udinga usekelo lwemali oluzwayo ukuze asekele amabhizimusi akuleli ngendlela engathuthukisa ezomnotho ukuze ilizwe lenelise ukuhlawulela izikwelede zalo.
U Mabhenge uthi ilizwe kumele lenze inhlolisiso yomumo wezikwelede zalo kusukela ngesikhathi sombuso wabamhlophe phansi kuka Ian Smith kuze kube manje engakagijimeli ukumotsha imali ebhadalela lezo zikwelede abantu belamba ngoba ezinye zazo kungenzakala ukuba ziqitshwe kokuphela.
Umnumzana Masimba Kuchera ocubungula ngezomnotho uthi kaboni lolusekelo lutholakala kalula. Uqhubeka ethi okwamanje uzamele akhangelele kwabamabhizimusi baselizweni uChinamasa emizameni yakhe yokuhlela indleko kahulumende eyeBudget.
UChinamasa uphakathi komsebenzi wokuqoqa uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali kahulumende olwe Budget ebhekane lenkinga zokuthi kufunakala imali enengi yokusekela imisebenzi yentuthuko khona kusobala ukuba uhulumende akalayo leyo mali njalo njalo kungela ndlela ezicacileyo zokubuthanisa leyo mali. Kunje abantu abedlula izigidi ezimbili 2,2 million babikwa bengabhekana lendlala enkulu lonyaka ngakhoke uhulumende kuzadingakala ukuthi aqhakathekise ukuthengela abantu ukudla kungakaphathwa ezinye indleko.